Camry ga cusub! - Toyota Sverige
CAMRY GA CUSUB.
WUXUU KU HOGAAMINAAYA DUNIDA FARSAMADA SAREYSA IYO QURUX.
Soo bandhigida Camry ga cusub! Isagoo ku qalabeysan farsamada hybrid-ka ee jiilka cusub ayuu Camry dareenka wadista geynayaa heer sareeya iyadoo uu la socdo dhaqaajinta awoodda badan ee cusub taas oo soo saareysa 218 hp. Camry gu waxa uu isku darsadey awood cajiib ah, qurux qiyaas ahaan isku jaan-go'an iyo shidaal beekhaamin aan wax la mid ahi jirin oo lehna qaaca CO2 -ga oo hooseeya, taasoo ku siinaysa canshuurta baabuurta oo hooseysa. Waxaad ku raaxeysan kartaa dareenka wadista baabuurta korontada ee aamusan iyadoo lagu socdo xawaaraha hayweyga oo dhan ilaa 125 km/saacadiiba. Iyadoo lagu soo naqshadeeyey oo laguna sameeyay warshada Toyota ee ku taala Japan ayuu Camry gu yahay midka noogu sancada sareeya abid ee hybrid-ka korontada ku socda.
Ku soo dhawow sii iibiyahaaga adiga kuugu dhow si aad ugu soo tijaabiso. Raadi sii iibiyahaaga kuugu dhow oo halkan adigu ku dhiso gaadhigaaga Camry ga ah. Dhamaan macluumaadku waxay ku qoran yihiin Iswiidhish.
Adigu maalgasho Camry gaaga cusub.
Camry, qiimaha caadiga ah oo ka bilaabmaaya 334.900 kr.
Flex Privatleasing oo ka bilaabmaaya 3.895 kr/bishii.
Wax dheeraad ah oo Camry ga cusub ku saabsan ka sii akhri
Qabso wakhti soo tijaabin ah
Wixii shuruudo ah
Shidaal isticmaalidda 4,3-4,8 l/100 km (NEDC), 5,3-5,5 l/100km (WLTP). Sii deynta qaaca CO2-ga 98-101 g/km (NEDC) 119-125 g/km (WLTP). Maalgasho iyadoo la soo maraayo Toyota Financial Services: tusaale ahaan Flex Kireysiga gaarka, khidmadda bishii oo uu ku jiro adeeggu, taas oo ku salaysan dulsaar/ribbo go'an, 36 biloood, 4500 mayl, iyo dammaanadda qiimaha hadhaaga ah/hanti ahaaneed. Wixii meylka ka baxsan (12.50 kr/mayl) iyo waxyeelooyinka ka baxsan wixii duugeysiga caadiga ah ayaanu kharashka kaa qaadeynaa marka la soo celiyo gaariga. Lacagta kala qorsheynta - iyo kharashka biilka boostada iyo canshuurta iyo kharashaadka ka imaanaaya Transportstyrelsen ayaa lagu darayaa. Dalabku waxa uu socdaa ilaa iyo 30-ka Sibtember 2019. Miljöklass Euro 6.2.
Iyadoo laga afeef dhiganaayo wixii ka duwanaansho ah, ee isbeddellada qiimaha iyo qaladaadka daabacaadda ah. Gaadhiga sawirka ku yaal wuxuu noqon karaa mid ku qalabeysan waxyaalo qalab dheeraada oo la doorto kuwaas oo aan laga heli karin Iswiidhan.